Leicester City oo taako u dhigtay Liverpool, xili Bournemouth ay si xun u xasuuqday kooxda Chelsea + SAWIRO – Gool FM
Leicester City oo taako u dhigtay Liverpool, xili Bournemouth ay si xun u xasuuqday kooxda Chelsea + SAWIRO
(Premier League) 31 Jan 2019. Ciyaarta ayaa lagu kala nastay qeybta 1-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool.
Daqiiqadii 3-aad ee bilawga ciyaarta Sadio Mane ayaa hogaanka u dhiibay kooxda Liverpool wuxuuna ka dhigay 1-0.
Laakiin dhamaadka qeybta hore ee ciyaarta Leicester City ayaa dhalisay goolka barbaraha waxaan ciyaarta 1-1 ka dhigay daqiiqadii 45-aad Harry Maguire.
Qeybta labaad ee dheesha marka dib leysugu soo laabtay, kooxda Liverpool oo inta badan ciyaartan iska maamulaneysay ayaa waxay halkeeda ka sii waday inay sameyso furado badan oo ay ku raadineysay in ay ku dhaliso goolkeeda 2-aad.
Laakiin ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 1-1 ay labada kooxood dhibcaha ku kala qeybsadeen.
Dhinaca kale kooxda AFC Bournemouth ayaa waxay cashar lama ilaabaan ah u dhigtay kooxda Chelsea, kadib markii ay ku xasuuqeen 4-0.
Goolasha kooxda Bournemouth ayaa kala dhashay daqiiqadihii 47-aad Joshua King, 63-aad David Brooks, halka daqiiqadii 74-aad uu Joshua King ciyaarta ka dhigay 3-0, balse 90 Charlie Daniels ayaa hurdo heer u diray kooxda Chelsea kadib markii uu ciyarta ka dhigay 4-0
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Barcelona vs Sevilla
Barcelona oo soo laabasho cajiib ah ku sameesay Cump Nou, kadib markii ay si xun u xasuuqeen kooxda Sevilla + SAWIRO